Mu'asasada 'McKnight Foundation' ayaa macsalaameyn doonta saaxiibkeed ay jecel yihiin dhamaadka bisha Luulyo. Ka dib 10 sano oo adeeg aan caadi ahayn iyo hoggaan, Aimee Witteman, oo ah maamulaha barnaamijka barnaamijka 'Westwest Climate & Energy', wuxuu go'aansaday inuu ka dego booskeeda.
Debime Landesman, madaxa guddiga McKnight wuxuu yidhi "Aimee waxay karti iyo xirfado badan u soo dhiibtay himilada McKnight." "Waxaan ugu mahadnaqaynaa howlaheedii dhiirrigelinta ahaa ee tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaanan sidoo kale u rajeyneynaa iyada sidii ay ugu diyaarin laheyd qaddarinteeda xigta."
Barnaamijka Midwest Cimilada & Tamarta waxaa la bilaabay 2013 iyada oo la raacayo jihada Witteman ka dib markii ay hoggaanka u haysay guddiga iyo shaqaalaha sare dib-u-habeyn ka horreeyay. Ilaa iyo markaas, Witteman wuxuu sii daayay deeqaha, saamaynta maalgashiga, iyo hawlgelinta hoggaamiyeyaasha dadweynaha iyo kuwa gaar ahaaneedba si ay ugu sii gudbiyaan kala-sooca qoto dheer ee nidaamka tamarta gobolka. Sanadka 2019, waxay mar kale ku hogaamisay guddiga iyo shaqaalaha barnaamijka dib u habeynta ee lagu soo gabagabeeyey go'aanka guddiga ee si weyn loo ballaarinayo Barnaamijka Cilmi-baarista iyo Cimilada ee MidwestBaaxadda iyo deeq-bixiyeyaasha saddexda sano ee soo socota.
"Aimee waxay u soo qaadatay hibo iyo karti ballaaran howsha McKnight. Waxaan uga mahadcelineynaa howlaheedii dhiirrigelinta ahaa ee tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaanan u rajeyneynaa iyada sidii wanaagsan iyadoo ay isku diyaarinayso tacaburinta soo socota. ” -LANDRIGA LANDESMAN, SIDA LAGU QAADO
Markii hore, Witteman wuxuu ahaa sarkaalka barnaamijka barnaamijka 'McKnight' ee deegaanka, isagoo ku takhasusay tayada biyaha iyo nidaamyada beeraha. Waxay sidoo kale jagooyin hoggaamineed ka qabtay dhowr urur oo aan faa'iido-doon ahayn oo waddanka oo dhan ah, oo ay ku jirto iyada oo ah agaasimaha fulinta ee Isbahaysiga Beeraha Joogtada ah ee Qaranka, halkaas oo ay ku hagtay u-doodidda siyaasadda federaalka, istiraatiijiyadda istiraatiijiyadeed, iyo dadaallada ololaha ee aasaasiga ah.
Witteman ayaa yidhi: "Aad ayaan ugu mahadnaqayaa uguna faan sanahay shaqada uu qabtay McKnight isaga oo kaashanaya deeq bixiyayaasheena iyo asxaabteena. Ballan qaadka cusub ee McKnight ee ah inuu ballaariyo shaqadiisa wax ka qabashada dhibaatada cimilada iyo horumarinta u sinnaanta midab-kala-sooca ee Minnesota ma dhici karin waqti ka sii muhimsan. Markii aan u jeestay dhinac cusub iyo fursado aniga iyo qoyskeyga ah, waxaan ku faraxsanahay inaan buugga u gudbiyo hogaamiyaha xiga. ”
Iyadoo hadafkeedu yahay in qaado tallaabo geesinimo leh dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboonka ee bartamaha-galbeed 2030, Barnaamijka Bartamaha Cimilada & Tamarta ayaa sharfan doona oo ku dhisi doona barashada wixii ay ka soo qaadatay shaqadiisa mudada dheer sii wadata iyada oo loo fidiyo fikradaha cusub. Xagaaga dambe, Aasaaska ayaa u soo diri doonta jago u furan agaasimaha barnaamijka cusub, waxayna rajeyneysaa inay ku dhawaaqdo xeeladaha ugu dambeeya iyo tilmaamaha barnaamijka ee barnaamijka 'Westwest Climate & Energy program' dayrta.